पुरै गाउँलाई नै ‘उल्लु’ बनाएर २ करोड भन्दा बढी रकम ठगेर भागिन् यी महिला, सयौं पीडित मिडिया गुहार्दै (भिडियो हेर्नुस्) – " सुलभ खबर "
वरालले २ करोड भन्दा बढी रुपैया लिएर भागेपछि अहिले एक सय भन्दा बढी ब्यक्ति न्यायका लागि मिडियामा आएका हुन् । मनु वरालले एउटा गाउँलाई नै कसरी झुक्याउन सकिन त ? यो अचम्मको कुरा हो । यति ठूलो हिम्म त आँट कसरी गरिन् ? मनु माइती वर्दियाको बाँसगढी हो । उनलाई बाँसगढी छँदा देखि नै चिनेकी एक जना महिलाले विवाह अघि देखि पनि उनले समुहहरुमा खेल्ने गरेको देखेको बताइन् । माइतीमा समुहहरुमा बसेर ऋण लिन गरेको भएपनि यस्तो समस्या भने कहिल्यै नदेखेको बताइन् । वरालको श्रीमान मोटरसाइकल दुर्घटनाका कारण अहिले हिरासतमा छन् ।
भारतीय मोटरसाइकल चलाउने गरेका उनका श्रीमानले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करवाट एक जनाको निधन भएपछि उनी कारागार गएका हुन् । उनले कारागारमा रहेका श्रीमानलाई बाहिर निकाल्छु भनेर रुँदै आफुसंग पैसा मागेको बताइन् । पैसा दिने बेलामा श्रीमानले त्यती धेरै पैसा नदेउ भन्नु भएको थियो तर मैले विश्वार गरेर दिँए । अहिले मलाई नै रुने बनाइन् ।
अहिले सबै जना एकैठाउँ भएपछि मात्र पीडितको संख्या यतिधेरै होला भन्ने आफुहरुलाई नलागेको बताए । विमला पोखरेलले अहिले यतिधेरै जम्मा भएपछि अचम्म परेको बताइन् । आफुले उनलाई करिब १५ वर्ष देखि चिनेको बताइन् । उनले धेरै पटक पैसा लैजाने र तिर्ने समेत गरेका कारण आफुले विश्वास गरेको बताइन् । उनले आफु धरौटीमा बसेर उनका लागि ४ लाख रुपैया निकालीदिएको पनि बताइन् । अहिले उनले आफुले वराललाई दिएको पैसाको व्याज तिर्ने गरेको बताइन् ।